Monday August 21, 2017 - 12:15:18 in Wararka by Super Admin
Markab John S. McCain
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay shil badda gunteeda ku qabsaday markab gujis dagaal ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka kaasi oo ka dhacay biyaha qaaradda Aasiya.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay in tobaneeyo katirsan ciidanka Mareykanka lala’yahay kuwa kalane ay dhinteen kadib markii Markab dagaal uu hertiyay markab shidaal siday oo ku sugnaa xeebaha wadanka Singapore.
Warka kasoo baxay ciidanka Badda Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka gujiska ah ee lagu magacaabo John S. McCain uu si lama filaan ah ugu dhacay markab shidaal xilli uu marayay xeebaha Bari ee wadanka Singapore aroornimadii hore ee saaka.
Dowladda Mareykanka waxay walaac ka muujisay masiirka 10 sarkaal oo lala’yahay waxaana loo maleynayaa in ay shilka ku dhinteen, markabka gujiska Mareykanka ayaa la sheegay in dhanka Bidix uu shilku ka haleelay islamarkaana bubur xooggan uu gaaray.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in markabkan gujiska ah ee shilku qabsaday uu siday sawaariikh casri ah wuxuuna kusii jeeday dekadda weyn ee magaalada caasimadda u ah wadanka Singapore oo heshiish dhan walba ah kula jiro dowladda Mareykanka.
Shil kan lamid ah oo 17,June 2017 ka dhacay xeebaha wadanka Japan waxaa ku dhintay 7 askari Mareykan ah kadib markii ay isku dhaceen markab gujis ah iyo doon ganacsi oo laga lahaa wadanka Filibiin.